Asa tanana Halloween 15 hanana fotoana mampatahotra | Asa tanana
Asa tanana Halloween 15 hifalifaly
Isabel Catalan | 14/10/2021 18:00 | Asa tanana Halloween, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Ho avy ny Halloween ary tonga ny fotoana hiomanana amin'ny fankalazana amin'ny fomba! Ahoana ny fitrandrahana fotoana hanaovana sasany Asa tanana Halloween supergirl miaraka amin'ny handravahana ny trano sy hialana fotoana mahafinaritra? Amin'ity lahatsoratra ity dia dinihinay ny sasany amin'ireo asa tanana namboarina indrindra nanao ireo fialantsasatra ireo. Aza adino izany!
1 Clip bat ary safidy hafa hankalazana ny Halloween amin'ity taona ity
2 Mpamosavy nipaoka ny doormat - asa tanana Halloween mora foana
3 Kilalaon'ny mpamosavy
4 Saka mainty misy baoritra
5 Fonosana sôkôla ho an'ny Halloween
6 Mama-baoritra mainty ho an'ny Halloween
7 Fehiloha Halloween hatao amin'ny ankizy
8 Kitapo biby goavam-be hanome vatomamy amin'ny Halloween
9 Mumi Halloween mora atao amin'ny ankizy
10 Tompon'ny labozia Halloween miendrika mamanay
11 Tsangambato lolly mahatsikaiky ho an'ny Halloween
12 Popcorn ho an'ny Halloween
13 Kely baoritra mahafinaritra
14 Saka ho an'ny Halloween
15 Mpamosavy kely satroka ho an'ny Halloween
Clip bat ary safidy hafa hankalazana ny Halloween amin'ity taona ity
Manomboka amin'ity isika bat clamp, iray amin'ireo asa tanana Halloween tsotra indrindra izay azonao omanina haingana miaraka amina fitaovana vitsivitsy izay efa anananao ao an-trano toy ny paompy hazo, marika mainty, baoritra mainty, hety, maso ho an'ny asa-tanana ary basy silikola.
Azonao atao ny mampiasa ity clip bat ity ohatra hanantonana ny ambain'ny trano, hanantonana akanjo eo amin'ny fehin-akanjo na handravahana kahie, ankoatry ny fampiasana maro hafa. Ao amin'ny lahatsoratra Clip bat ary safidy hafa hankalazana ny Halloween amin'ity taona ity ianao dia hahita ireo torolàlana hanamboarana azy ireo.
Mpamosavy nipaoka ny doormat - asa tanana Halloween mora foana
Ilay momba ny mpamosavy dia iray amin'ireo lohahevitra mifandray indrindra amin'ny antoko Halloween. Izany no antony tsy tokony hanjavonany amin'ity lisitra ity. Mitondra iray amin'ireo asa tanana mahatsikaiky indrindra amin'ny Halloween izay azonareo omanina amin'ity vanim-potoana ity ary hahafahanao manaitra ireo vahiny raha mankalaza fety ao an-trano ianao. Mampihomehy izany tiako holazaina doormat miendrika mpamosavy torotoro, iray amin'ireo asa tanana tsotra indrindra hatao ao an-trano.
Mila kiraro sy ba kiraro fotsiny ianao, fonosana amin'ny ondana ary doormat. Mba hahitana ny fomba anaovany izany dia manoro hevitra anao aho hamaky ny lahatsoratra Mpamosavy tototry ny doormat izay hahitanao ny dingana tsirairay.
Haingo iray hafa izay tsy azo banga ao an-trano hankalazana io daty manan-danja io dia ny kifafa-mpimasy. Raha te-hikasika ny haingon-trano ianao, dia manome hevitra anao aho mba hamerina ity Kilalaon'ny mpamosavy izay tsy ilanao fitaovana maro. Raha ny marina, ny hany sisa hataonao dia makà rantsana vitsivitsy sy kofehy vitsivitsy hamatorana azy ireo. Mora izany!
Na izany aza, raha te-hahita ny fomba fanaovana azy amin'ny antsipiriany ianao dia manoro hevitra anao aho hamaky ny lahatsoratra Kilalaon'ny mpamosavy handravahana amin'ny Halloween.
Saka mainty misy baoritra
Ny biby ankafizin'ny mpamosavy dia tsy tokony hanjavona amin'ity lisitr'ireo asa tanana Halloween ity ihany koa. Izy io dia mahazatra ary ny ankizy dia ho tia mandray anjara amin'ny haingon-trano amin'ny fanaovana izany mahafinaritra saka mainty azon'izy ireo apetraka ao amin'ny efitranony. Atao anaty jiffy izy io ary mora be. Ho fanampin'izay, dia miharihary tsara eo akaikin'ny kifafa izay asehoko anao amin'ny asa-tanana teo aloha.
Amin'ny maha fitaovana anao dia mila maka baoritra mainty ianao ary loko hafa tianao, ny mason-tsivana, ny lakaoly ary ny hety. Azonao atao ny mahita ny fomba fanamboarana azy amin'ny paositra Saka mainty misy baoritra. Ho tianao izany!
Fonosana sôkôla ho an'ny Halloween
Tian'ny ankizy ny vatomamy sy sôkôla. Fotoana mahafinaritra i Halloween mba hamelana ny fisainanao hihazakazaka sy hanomana vatomamy misy endrika mifanaraka amin'ny lohahevitra. Ohatra ity vampira mijery fonosana hanolotra sôkôla vitsivitsy. Gaga ny ankizy sy ny olon-dehibe ianao!
Ity dia iray amin'ireo asa tanana Halloween izay tsy mila fitaovana be dia be akory ianao. Vonona ny baoritra mainty sy marozona, maso mpanao asa-tanana, kitay lakaoly, bara sôkôla ary hety. Mora izany! Raha te hahita ny fomba anaovana azy tsikelikely ianao dia aza adino ny lahatsoratra Fonosana sôkôla ho an'ny Halloween.
Mama-baoritra mainty ho an'ny Halloween
Ny toetra mampiavaka an'izao rehetra izao Halloween dia ny mummies. Raha manamboatra asa tanana Halloween marobe amin'ity taona ity ianao, ity dia tsy tokony ho diso amin'ny lisitrao! A mamy baoritra mainty tena tsotra ny manao azy sy hanaovana azy dia tsy mila fitaovana be dia be ianao, baoritra mainty kely fotsiny, pensilihazo, famafana, volon'ondry fotsy, mason-tànana, lakaoly, hety ary kasety.
Raha te hahalala amin'ny antsipiriany ny torolàlana momba an'io asa tanana io ianao dia mamporisika anao hamaky ity lahatsoratra ity Mama-baoritra mainty ho an'ny Halloween.
Fehiloha Halloween hatao amin'ny ankizy
Raha mitady asa tanana Halloween ianao satria mikasa ny hanao fety dia hanampy anao handravaka ny efitrano hankalazanao azy ity garlandy ity. Mora tokoa ny manao azy ary mety ho an'ny ankizy ny mandray anjara sy miara-miasa amin'ny haingon-tsoratry ny fety.
Ireo fitaovana ilainao hanomanana izany fehiloha mampihomehy Izy ireo dia taratasy fananganana mainty sy volomboasary, kasety, pensilihazo, hety, famafana ary kofehy fotsy. Raha te hahita ny fomba anaovana azy ianao dia aza misalasala manindry ny paositra Fehiloha Halloween hatao amin'ny ankizy ary ao no hahitanao tsipiriany tsikelikely.
Kitapo biby goavam-be hanome vatomamy amin'ny Halloween
Fomba iray hafa hanaitra ny ankizy kely mandritra ny fety Halloween ny fanaovana sy mizara ity fonosana kely mahafatifaty kely misy vatomamy ity. Tian'izy ireo izany! Izy ireo ihany dia afaka mandray anjara amin'ny fikarakarana azy ireo ary manolotra azy ireo amin'ny sisa amin'ny vahiny mandritra ny fety.
Mba hanaovana izany fonosana vatomamy goavambe Mila kojakoja vitsivitsy fotsiny ianao: baoritra iray avy amin'ny horonan-taratasy fidiovana, maso mpanao asa-tanana, taratasy fananganana miloko, hety ary basy lakaoly mafana. Fantaro ny fomba nanaovana azy tamin'ny paositra Kitapo biby goavam-be hanome vatomamy amin'ny Halloween.
Mumi Halloween mora atao amin'ny ankizy
Ity mummy ity dia iray amin'ireo asa tanana Halloween mora foana ka na ny ankizy aza dia afaka manamboatra azy samirery. Handany fotoana mampiala voly tokoa izy ireo amin'izany mamanay handravaka ny efitranonao na zoro hafa ao an-trano.
Mba hanaovana an'io asa-tanana io dia azonao atao ny mampiasa ny sasany amin'ireo fitaovana izay efa anananao ao an-trano avy amin'ny asa tanana hafa teo aloha, toy ny baoritra taratasy fidiovana, maso mihetsika, horonan-tadin'ny fotsy, hety, pensilihazo ary kasety kely. Raha hijery ny fomba fanaovana azy dia aza adino ny lahatsoratra Mumi Halloween mora atao amin'ny ankizy.
Mba handravahana ireo efitrano ao an-trano sy hanomezany azy hikasika matoatoa, inona ny hevitrao momba ny fanaovana an'io labozia mangatsiatsiaka io amin'ny endrika mamanay?
Iray amin'ireo asa tanana Halloween tsara tarehy sy tsotra indrindra izy io. Ho fitaovana ho an'ity mpandio labozia Tsy maintsy mahazo siny fitaratra ianao, bandy, labozia vitsivitsy, maso asa-tanana ary basy lakaoly mafana. Mora izany! Raha hijery ny fomba nanaovana an'ity mummy ity dia jereo ity lahatsoratra ity Tompon'ny labozia Halloween miendrika mamanay.
Tsangambato lolly mahatsikaiky ho an'ny Halloween
Ity dia iray amin'ireo asa tanana Halloween mora indrindra omanina miaraka amin'ny ankizy. Voalohany dia tsy maintsy mihinana popsicle vitsivitsy izy ireo ary miaraka amin'ireo sisan-kazo sisa tavela dia afaka manomana izany fahafinaretana izany izy ireo asa tanana biby goavambe mahafatifaty. Hanana fipoahana azo antoka izy ireo!
Fitaovana hafa hanaovana an'io asa-tanana io ny maso mihetsika, lakaoly, hety, fialonana, tady fotsy, marika misy loko. Azonao atao ny mahita ny fomba nanaovany azy tamin'ny paositra Tsangambato lolly mahatsikaiky ho an'ny Halloween.
Popcorn ho an'ny Halloween
Ny kilasika izay tsy mety tsy hita amin'ny fety Halloween rehetra dia kitapo misy popcorn misy lohahevitra. Ity dia miendrika taolana. Mora tokoa ny fanomanana azy ireo, noho izany dia mila taratasy popcorn vitsivitsy sy mangarahara ianao, kofehy hamehezana ny fonosana ary marika mainty handoko ny karan-doha.
Na izany aza, raha te hahita ny fomba anaovana azy tsikelikely ianao dia manoro hevitra anao aho hamaky ny lahatsoratra Popcorn ho an'ny Halloween. Hanomana azy ireo amin'ny jiffy ianao!
Kely baoritra mahafinaritra
Raha manana horonan-taratasy vita amin'ny baoritra roa ianao ao an-trano ary tianao ny manararaotra azy ireo hanao asa tanana, dia tsara izany baoritra baoritra Tsara raha handravaka ny efitranon'ny trano. Mampiasà taratasy fananganana mainty, fotsy, mavo, hety, lakaoly, marika ary marika mena. Ho tsara ny valiny!
Raha te hahita ny fomba nanaovana azy ianao dia kitiho ny lahatsoratra Ny ramanavy mahatsikaiky hatao amin'ny Halloween miaraka amin'ny ankizy.
Saka ho an'ny Halloween
El saka mainty Izy io dia biby iray izay fantatry ny Halloween amin'ny fomba nentim-paharazana ary manome kilalao betsaka handravahana fety iray karazana toy izany. Raha tianao ireo biby ireo, dia asa tanana iray ahafahanao manana fotoana tsara anaovana azy io. Tsy dia sarotra loatra ny manao azy fa mila mitandrina ny antsipiriany mba hahatonga azy ho tonga lafatra.
Mba hamoronana azy dia mila fitaovana vitsivitsy ianao (baoritra miloko, penina mainty, kompà, mpanadio fantsona fotsy roa, hety, pensilihazo, marika mainty, sns.) Saingy io dia iray amin'ireo asa tanana Halloween izay anananao ny fotoana mety indrindra. Ho fanampin'izay, azonao ahantona amin'ny toerana rehetra ao an-trano izy io mba ho tsara tarehy sy eny am-baravarana mihitsy aza. Raha te hahita ny ambiny amin'ireo fitaovana ianao sy ny sary an-tsary ny fomba nanamboarana an'io saka io tsikelikely dia zahao ny paositra Saka ho an'ny Halloween.
Mpamosavy kely satroka ho an'ny Halloween
Amin'ny Halloween dia tsy afaka mahita satroka mpamosavy ianao! Azonao atao ao an-trano izany amin'ny alàlan'ny fitaovana izay natahirinao tamin'ny fotoana hafa ary ho tian'ny ankizy ny mandray anjara amin'ny fizotry ny famokarana satria tena tsotra ity asa tanana ity.
Mba hanaovana izany mpamosavy Miaraka amin'ny tarehy sahona dia mila fitaovana vitsivitsy fotsiny ianao: baoritra mainty, foam amin'ny loko isan-karazany, pensilihazo, hety, kompà ary zavatra hafa. Raha te hahalala ny ambiny amin'ireo fitaovana ianao sy ny torolàlana hanaovana an'io satroka mpamosavy mampihomehy io dia aza adino ny lahatsoratra Mpamosavy kely satroka ho an'ny Halloween. Io dia ho iray amin'ireo asa tanana Halloween izay tian'ny ankizy indrindra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Asa tanana Halloween 15 hifalifaly
Tavoara antitra handravahana
Hevitra 4 handravahana ny tranontsika amin'ny Halloween